Mawliid Aadan Biixi : Shakhsi Mudan Abaal-marin Qaran & Dhiiri-gelin. - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Mawliid Aadan Biixi : Shakhsi Mudan Abaal-marin Qaran & Dhiiri-gelin.
Mawliid Aadan Biixi Waa nin da’yar oo ka mida ah dhalinyarada ku dhaqan Magaalada Hargaysa ee xarunta Jamahuuriyada Somaliland.
Mawliid waa Macalin waana Barnaamij soo saare ka tirsan idaacada Radio Hargeysa oo ah idaacadda ugu faca wayn isla markaana ah idaacadii ugu horaysay ee idaacadaha afka soomaaliga ku hadla oo aasaasay 1941 oo laga joogo 78 sano.
Mawliid waxa uu Soo diyaariyaa oo uu soo jeediyaa barnaamijka qiimaha badan ee Hidaha iyo Dhaqanka oo uu dhawrkii sannadood ee u danbeeyey uu soo saare ka ahaa.
Barnaamijkaasi oo hortii lagu bartay caanna uu ku ahaa dhaqan-yaqaan Muuse Cali Faruur oo ah odayaasha waawayn ee dhaqanka iyo suugaanta afkeena wax laga waydiiyo isla markaana ah nin qiimaha uu maanta leeyahay aynaan ku baraarugsanayn balse maalin kale aynu ka calaacali doono sidaynu uga faa’idaysan waynay isaga iyo inta la hal-maasha ee faro-ku-tiriska ah.
Dhaqan-yaqaan Abwaan Muuse Cali Faruur waxa isna uga sii horeeyey barnaamijkan dhaqanka Alle haw naxariistee Yuusuf Maygaag Samatar oo ahaa dhaqan-yaqaan wayn aad-na ugu fiicnaa barnaamijka Hiddaha iyo Dhaqanka, hadaba yaanan taraarine aan mar kale aan u soo noqdo Mawliid Aadan Biixi.
Mawliid waa nin af gaaban, akhlaaq badan, una dhashay karti iyo dadaal badan isla markaana xoogga saara inta awooddiisa ah ururinta iyo barashada aqoonta dhaqankeena iyo suugaanta afkeena hooyo ee hodanka ah, arintaasi oo ah mid aanay qiimaheeda iyo mudnaanteeda badi dadkeenu fahansanayn isla markaana aanay dhaadanayn dagaalka fog ee lagu hayo burburka iyo xididdo u siibida hidaha iyo dhaqankeena suuban.
Mawliid Aadan Biixi isagoo ka duullaya arintaasi waxa uu garaadkiisa ku gartay inuu isku xil saaro inuu wax ka reebo dhaqan-yaqaankeena gabaabsiga ah ee maalinba mid wadku haleelayo dadaalkaasi oo maanta Mawliid ka dhigay nin horseed ugu ah da’diisa aqoonta dhaqankeena, dhankastoo ay ahaataba.
Waxa kale oo xusid iyo xusuus mudan Mawliid inuu soo saaray buugaag uu kusoo ururiyey heesihii iyo suugaantii hooballadeenii caanka ahayd oo uu ugu magac-daray HOOBAL
Hadaba waa su’aale miyaanay mudnayn in dhiiri-gelin qaran loo sameeyo Mawliid iyo inta la da’da ah ee dadaalkaasi ku hawllan, si loo helo dhalinyaro kale oo badan oo iyaguna barashada afkooda iyo dhaqankooda baadha oo daryeela una gudbiya inta ay isku ayniga yihiin ee ay wakhtiga badan ee dhalinyarnimo wadaagaan.
Dhaqan-yaqaan Mawliid Aadan Biixi
W/Q: Suxufi Mubaarik Cabdi Yuusuf.